အကောင်းဆုံးအခမဲ့ Crypto အချက်ပြမှုများ ဇွန်လ 2022 & Crypto သတင်းများ | cryptosignals.org
Crypto စျေးကွက်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း၊ ၎င်းအားအဘယ်ကြောင့်ရောင်းဝယ်သင့်သနည်း။ စတင်လေ့လာသူလမ်းညွှန်
အကောင်းဆုံး Crypto အချက်ပြကြေးနန်းအဖွဲ့များ - လမ်းညွှန်အပြည့်
အကောင်းဆုံး Bitcoin ပွဲစားများ
အကောင်းဆုံး Ethereum ပွဲစားများ
Basic Attention Token ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ
Crypto ကိုမည်သို့အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ
Crypto အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ရန်လေ့လာပါ
Crypto Pips ဆိုတာဘာလဲ
Credit Card ဖြင့် Crypto ကို ၀ ယ်ပါ
Debit Card ဖြင့် Crypto ကို ၀ ယ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ VIP ကြေးနန်းအဖွဲ့သို့ဆက်သွယ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ VIP Signals များကို တစ်သက်တာအသုံးပြုခွင့်ရရန် eToro ဖြင့် $250 အပ်နှံလိုက်ပါ။
VIP အချက်ပြမှုများကို အခမဲ့ရယူပါ။
ထောင်ပေါင်းများစွာ CFDs ကုန်သွယ် ထောင်ပေါင်းများစွာ CFDs ကုန်သွယ်
2022 အကောင်းဆုံး Crypto Signals
CryptoSignals.org သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ cryptocurrency ဈေးကွက်ကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောကျွမ်းကျင်အဆင့်မြင့်ကုန်သည်များအဖွဲ့ဖြစ်သည်
အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ကွေးနနျးစာ အခြားသူများကကျွန်ုပ်တို့၏တိကျသော cryptocurrency အချက်ပြမှုများကနေလေ့လာသင်ယူနိုင်အောင်။
နေ့စဉ် Cryptocurrency အချက်ပြမှုများသော့ဖွင့်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ join VIP အုပ်စု သင့်အတွက်သင့်လျော်သောအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော package တစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရက်ပေါင်း ၃၀ ငွေပြန်အမ်းမည့်အာမခံချက်ကိုပေးသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်မားသော cryptocurrency အချက်ပြမှုကိုကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်ဆုံးရှုံးစရာမရှိချေ။
ငွေတောင်းခံ လစဉ် £ 42
ဝင်ငွေ, အမြတ်ယူ & Stop Loss
လူကြိုက်အများဆုံး ငွေတောင်းခံ သုံးလတစ်ကြိမ် £ 78
ငွေတောင်းခံ BI-နှစ်စဉ် £ 114
ငွေတောင်းခံ နှစ်တိုင်း £ 210
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လာ!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွဲစားတစ်ယောက်နဲ့အကောင့်ဖွင့်ပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးရယူသုံးစွဲပါ VIP Crypto အချက်ပြများ အလကား! အောက်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်ထားသော ထိန်းချုပ်ထားသော Crypto ပွဲစားဖြင့် အနည်းဆုံး $250 ကို မှတ်ပုံတင်ပြီး ငွေသွင်းပါ။
eToro သည် Forex၊ စတော့များနှင့် Cryptocurrencies များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့် CFD ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရောင်းဝယ်ခြင်းနှစ်ခုစလုံးကိုပံ့ပိုးပေးသောဘက်စုံပိုင်ဆိုင်မှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ CFD များသည်ရှုပ်ထွေးသောတူရိယာများဖြစ်ကြပြီး leverage ကြောင့်ငွေဆုံးရှုံးရမည့်အန္တရာယ်မြင့်မားလာသည်။
CFD များသည်ရှုပ်ထွေးသောကိရိယာများဖြစ်ပြီး၊ သြဇာကြောင့်ပိုက်ဆံလျင်မြန်စွာဆုံးရှုံးနိုင်ခြေမြင့်မားသည်။ ဤပံ့ပိုးသူနှင့် CFD များရောင်းဝယ်သောအခါလက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏အကောင့်၏ ၇၁.၂% သည်ငွေဆုံးရှုံးသည်။
500:1 လွှမ်းမိုးမှုအထိ၊ ရရှိနိုင်သော CFDs နှင့် Leverage အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ ထောင်ပေါင်းများစွာကို ကုန်သွယ်မှုပြုပါ။ တစ်နေရာတည်းတွင် အညွှန်းကိန်းများ၊ FX၊ Crypto နှင့် အခြားအရာများ။ အသုံးပြုရလွယ်ကူသော အင်တာဖေ့စ်နှင့် ဆန်းသစ်သောအင်္ဂါရပ်များကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပိုမိုင်များဆီသို့ သွားပါသည်။
ငါတို့ Join အခမဲ့ကြေးနန်းအုပ်စု
တစ်ပတ်လျှင် VIP အချက်ပြ ၃ ကြိမ်ပေးပို့ပါမည် အခမဲ့ကြေးနန်းအုပ်စုအချက်ပြမှုတစ်ခုချင်းစီသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်သွယ်ရေးကိုအဘယ်ကြောင့်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းနှင့်သင်၏ပွဲစားများမှတစ်ဆင့်မည်သို့နေရာချရမည်ကိုအပြည့်အဝနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့်လာသည်။
VIP အုပ်စုသည်မည်သည့်အရာနှင့်တူသည်ကိုယခုပင်အခမဲ့ ၀ င်ရောက်ခြင်းဖြင့်ခံစားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ကြေးနန်းဆက်သွယ်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Signals အကြောင်းကိုလေ့လာပါ
ထိပ်တန်းအဆင့် Crypto Signals ၏နေအိမ်
သင့်ဆီသို့ပို့ဆောင် ကြေးနန်းအက်ပလီကေးရှင်း အချိန်နှင့်တပြေးညီ!
ကျွန်ုပ်တို့၏ CryptoSignals.org ရှိအိမ်တွင်းကုန်သည်များအဖွဲ့သည် Crypto စျေးကွက်ကိုနာရီဝက်တိုင်းစစ်ဆေးသည်၊ သင်မလိုအပ်ပါ။ နက်ရှိုင်းသောနည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ AI algorithms နှင့်အခြေခံသုတေသနများပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့် CryptoSignals.org သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း ၀ င်များအတွက်ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုအဆက်မပြတ်ရှာဖွေနေသည်။
အကယ်၍ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာဘာလုပ်သည်ကိုရှင်းပြရန်ခွင့်ပြုပါ CryptoSignals.org
DeFi Coin စျေးနှုန်းခန့်မှန်းချက်- DEFC/USD သည် စျေးနှုန်းပိုမိုမြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ $0.15 သို့ရောက်ရှိသည်
Ethereum သည် $1,200 အမြင့်ဆုံးကိုချိုးဖောက်ရန်ပျက်ကွက်သောကြောင့်ကျဆင်းနိုင်သည်။
Compound (COMPUSD) Bulls များသည် စုစည်းမှုနည်းဗျူဟာဖြင့် စျေးကွက်ကို တွန်းပို့သည်။
ဇြန္လ 24, 2022
Bitcoin Cash (BCH/USD) စျေးနှုန်းသည် နိမ့်သောနေရာတွင် ဘေးဘက်သို့ ရွေ့လျားသည်။
Polkadot Bulls သည် $6.3 အမြင့်ဆုံးကို တိုက်နေသဖြင့် $8.27 ပံ့ပိုးမှုကို ကာကွယ်သည်။
Solana သည် Blockchain နှင့် Web3-လိုက်ဖက်သောစမတ်ဖုန်း Saga ကိုဖွင့်သည်။
Synthetix (SNXUSD) သည် Overbought Region တွင် တည်ရှိနေသည်။
Bancor (BNTUSD) ဝက်ဝံများသည် $0.150 ပံ့ပိုးမှုအဆင့်အတွက် ရည်မှန်းထားသည်။
Bitcoin သည် တူးဖော်ရခက်ခဲမှု 2.35% ကျဆင်းသွားသည်နှင့်အမျှ Bitcoin သည် ရှာဖွေရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်
ဇြန္လ 23, 2022
Uniswap (UNI/USD) စျေးနှုန်း ရုန်းကန်မှုများ၊ ပျမ်းမျှ ၆ ဒေါ်လာသို့ ကူးပြောင်းခြင်း။
Bulls Target သည် $0.30 ၏ အမြင့်ဆုံးကို $0.38 ဖြင့် Ripple က ထိန်းထားသည်။
သင် ၀ င်ရောက်လာသည့်အရာ
အချက်ပြ VIP Group မှ
အကယ်၍ သင်သည် cryptocurrency ဈေးကွက်၌အသစ်ဖြစ်နေပြီး၎င်းကိုမည်သို့ကုန်သွယ်ရမည်ကိုလေ့လာလိုလျှင်၊ မှန်ကန်စွာစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကိုအမြတ်အစွန်းသို့ရယူလိုပါက၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကမ်းလှမ်းချက်များအကြောင်းပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
Bitcoin တစ်ခုတည်းကိုသာကုန်သွယ်ရန်လစဉ် pips ၁၅၀၀ ရရှိရန်ရည်ရွယ်သည်။
ကုန်သွယ်မှုတိုင်းသည်နည်းပညာအပြည့်အစုံပါ ၀ င်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကုန်သွယ်ခြင်းကိုဘာကြောင့်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပြီးသင်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နေစဉ်သင်လေ့လာနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သည်။
ကုန်သွယ်မှုတိုင်းနှင့် RRR (စွန့်စားရမှုအချိုးအစား) တိုင်းကိုကုန်သွယ်မှုတိုင်းနှင့် 1:2& 1:3အချိုးပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။ သို့မှသာသင်သည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုတွင်အလွန်အမင်းစွန့် စား၍ အမြတ်အစွန်းရရှိရန်အခွင့်အလမ်းပိုမြင့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြမှုများသည် Telegram မှသာလျှင်ပေးပို့သည်။ ထိုနည်းတူအချက်ပြမှုရောက်သည်နှင့်ချက်ချင်းပင်သင့်ထံသို့ရောက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ VIP အုပ်စုတွင်ပါဝင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သည်များမှဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံများစွာကိုသော့ဖွင့်နေသည်။ လအနည်းငယ်ပေးချေမှုဆိုသည်မှာသင်သည် ELIT သို့ဆက်သွယ်နေသည်ဟုဆိုလိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်အမြဲတမ်းစျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့နှင့်သင်အဖို့အချိန်များများရလိမ့်မည်။ ကုန်သွယ်ရေး၊ ဦး ရေပြားနှင့်ကုန်သွယ်ရေးအမျိုးမျိုးကို BUY STOPS, SELL STOPS & BUY LIMIT စသည်တို့ကိုအသုံးပြုသည်။
အခမဲ့ Telegram အုပ်စုတွင်တစ်ပတ်လျှင် VIP အချက်ပြ ၃ စောင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့သည်။ အချက်ပြမှုတစ်ခုစီသည်ကုန်သွယ်မှုကိုအဘယ်ကြောင့်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းနှင့်သင်၏ပွဲစားမှတစ်ဆင့်မည်သို့နေရာချရမည်ကိုအပြည့်အဝနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပါရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Crypto Signal များအလုပ်လုပ်ပုံ
အကယ်၍ သင်သည် crypto အချက်ပြလောကတွင်အသစ်အဆန်းဖြစ်နေပါက Layman's Terms တွင်သင့်အတွက်အခြေခံများကိုဖြိုဖျက်ရန်ခွင့်ပြုပါ။
crypto အချက်ပြမှု၏အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအကြံပြုချက်ကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုတဆင့် Real-time မှတဆင့်ဖြတ်သန်းပါလိမ့်မယ်
ကွေးနနျးစာ - ဒါကြောင့်သင်ဟာဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းကိုဘယ်တော့မှလက်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ခုချင်းစီကို signal ကိုအဖွဲ့မှာ CryptoSignals.org အရေးကြီးတဲ့သတင်းအချက်အလက်အစုတခုပါလိမ့်မယ်ထွက်ပေးပို့သည်။ ဤအချက်အလက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြမှုမှမည်သို့အကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်ကြောင်းကိုဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်သည်
သင်ရွေးချယ်ထားသောပွဲစားမှသက်ဆိုင်ရာအမှာစာများ။ မင်းကိုဘာတစ်ခုစိတ်ကူးပေးဖို့ CryptoSignals.org crypto အချက်ပြပုံ - ဥပမာအတွက်စစ်ဆေးပါ LTC / အမေရိကန်ဒေါ်လာ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော:
ရပ် - ဆုံးရှုံးမှု
ယူ - အမြတ်
အပေါ်ကပုံတွင်တွေ့နိုင်သည့်အတိုင်းအကောင်းဆုံး crypto အချက်ပြများသည်အဓိကအချက် ၅ ချက်ပါ ၀ င်သင့်သည်။ ဤသည် crypto pair တစုံကိုယ်တိုင်ကဖြစ်ပါသည် - ဤဥပမာထဲမှာ LTC / USD ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအချက်ပြမှုသည်ရှည်လျားစွာသွားရန်လည်းသတ်မှတ်သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်းလေ့လာသုံးသပ်သူကထိုစုံတွဲသည်တန်ဖိုးတက်မည်ဟုထင်နေသည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့အကောင်းဆုံး crypto အချက်အလက်များသည်လိုအပ်သောကန့်သတ်ချက်, stop-loss နှင့် take-profit order စျေးနှုန်းများနှင့်အတူလာသင့်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤသော့ချက်ကျသောကုန်သွယ်ရေးအသုံးအနှုန်းများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပါက crypto signal ၀ န်ဆောင်မှုကိုမ ၀ င်ခင်ဤအချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ကောင်းစွာနားလည်ထားခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံး CRYPTO အမှတ်အသားများသည် အဘယ်အရာနှင့်တူသနည်း။
ဤတွင်အကောင်းဆုံး crypto အချက်ပြပုံနှင့်မည်သို့သောအသုံးအနှုန်းဆိုလိုသည်ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဒီတစ်ခုကတော်တော်လေးရှင်းလင်းတယ်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြမှုသည်မည်သည့်အဆက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်ဟုပြောစရာမလိုပါ။ CryptoSignals.org မှအိမ်တွင်းလေ့လာသုံးသပ်သူများသည် cryptocurrency market များကျယ်ပြန့်စွာအထူးပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုသင့်သည်။ ၎င်းတွင် crypto-to-fiat သာမက crypto-to-crypto အတွဲများပါ ၀ င်သည်။ သတိမထားမိသူများအတွက် crypto-to-fiat စုံတွဲသည် Bitcoin ကဲ့သို့သောဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာကဲ့သို့သောတစ်မျိုးတည်းသောငွေကြေးတစ်ခုပါ ၀ င်လိမ့်မည်။ ဒီဥပမာမှာ pair တစုံကို BTC / USD အဖြစ်ကိုယ်စားပြုလိမ့်မယ်။ စကားမစပ်, ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အများဆုံးကုန်သွယ် cryptocurrency pair တစုံဖြစ်ပါသည် - ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာနေ့တိုင်းလက်ပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်အတူ။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲထားပြီးကျွန်ုပ်တို့ထံမှသင်ရရှိသော crypto အချက်အလက်များသည် CryptoSignals.org သည်ဤစျေးကွက်တွင်အခြေပြုလိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သည်များသည်အမျိုးမျိုးသော crypto-to-crypto အတွဲများကိုအရောင်းအ ၀ ယ်ပြုကြသည်။ ၎င်းတွင် BTC / ETH အမျိုးအစားများပါ ၀ င်သည် - ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် Bitcoin နှင့် Ethereum အကြားငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုရောင်းဝယ်နေကြသည်။ နောက်ထပ်တစ်ခု crypto စုံတွဲ ...
crypto အချက်ပြနေရာ၌မဖြစ်မနေလိုအပ်သောနောက်ထပ်သောမက်ထရစ်သည်စျေးကွက်၏ ဦး တည်ချက်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်ကုန်သွယ်မှုအပေါ်ရှည်လျားသို့မဟုတ်တိုတောင်းသငျ့သလော ဤအချက်အလက်မရှိပါက crypto signal သည်တန်ဖိုးမရှိပါ။ သတိမထားမိသောသူများအတွက် - ကျွန်ုပ်တို့၏ crypto signal သည်သင့်အားကြာမြင့်စွာသွားရန်ပြောပါက၎င်းသည် pair သည်တန်ဖိုးတိုးလာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ crypto signal သည်သင့်အားတိုတောင်းရန်ပြောလျှင်ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် pair သည်တန်ဖိုးလျော့သွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဆိုလိုသည်။ အကယ်၍ crypto signal သည်သင့်အားကြာမြင့်စွာသွားရန်ညွှန်ကြားပါက၊ သင်ရွေးထားသော crypto ပွဲစားတွင်သင်ဝယ်ရန်အမှာစာကိုထားရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော် crypto signal သည်သင့်အားတိုတောင်းရန်ပြောလျှင်၊ ရောင်းမည့်အမှာကိုရွေးချယ်ရန်လိုသည်။ PipSignals မှလေ့လာသုံးသပ်သူများသည် crypto အတွဲများကိုရှည်။ တိုတောင်းသောသွားခြင်းကိုသက်သာစေသည်။ အရေးကြီးသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ရောင်းဝယ်သည့်သက်ဆိုင်ရာဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ အဲဒီအစားကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာရာထူးမှအမြတ်အစွန်းရရန်ဖြစ်သည်။ ...
၎င်းကိုမမှားပါနှင့် - အကောင်းဆုံး crypto အချက်ပြများသည်လိုအပ်သောကန့်သတ်ချက်အမှာစာနှင့်အမြဲတမ်းလာလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကုန်သွယ်မှုအတွက်အသစ်အဆန်းဖြစ်နေပါကစျေးကွက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ရန်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အွန်လိုင်းပွဲစားအများစုက 'စျေးကွက်အမှာစာ' ကိုလိုချင်လားဟုမေးကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာပွဲစားသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုချက်ချင်းပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ဤအရာသည်ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်ကောင်းမွန်သော်လည်း၎င်းသည်ရေတို crypto အရောင်းအဝယ်အတွက်တကယ်မသင့်တော်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကုန်သွယ်မှုကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ၀ ယ်ဖို့ဆိုတာစွန့်စားမှုပိုများတာကိုဆိုလိုတာပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ CryptoSignals.org မှကျွန်ုပ်တို့သည် BTC / USD ကိုကုန်သွယ်နေသည်ဟုဆိုပါစို့။ ၎င်းသည်လက်ရှိတွင်ဒေါ်လာ ၄၉၅၀၀ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်တွင်းရေးလေ့လာသုံးသပ်သူများအဖွဲ့သည်နည်းပညာများကိုကြည့်ပြီး BTC / USD ကဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ ကိုချိုးဖောက်သင့်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ကောင်းဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ထို့နောက်ရှည်လျားသောရာထူးကိုယူသင့်သည်။ $ 49,500 အထက်ဈေးနှုန်းဖြင့်သာ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် ... curren မဟုတ်ပါ။
ယခုအချိန်ထိအကောင်းဆုံး crypto အချက်အလက်များသည်မည်သည့်ကုန်သွယ်ရေး၊ မည်မျှရှည်ရမည်၊ တိုမည်၊ မည်သည့်ဝင်ငွေစျေးနှုန်းကိုသင်ကန့်သတ်မိန့်ကိုသတ်မှတ်သင့်ကြောင်းပြောပြလိမ့်မည်။ သို့သော်ဤသည်မှာစစ်ပွဲ၏ထက်ဝက်သာဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ စွန့်စားမှုမှရှောင်ရှားနိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်ကုန်သွယ်ရန်အတွက်သင့်အနေဖြင့်ဝင်ပေါက်မဟာဗျူဟာတစ်ခုသင့်တွင်ရှိသင့်သည်။ ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့ CryptoSignals.org မှသင်၏ crypto အချက်အလက်များမှသင်အမြတ်ထုတ်ရန်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုသေချာစေရန် - ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတစေအရှုံးနှင့်အမြတ်ယူရန်အမိန့်များကိုအမြဲပေးသည်။ ရပ်တန့်မှုဆုံးရှုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်စွန့်စားရမှုစီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်သွယ်ရေးတွင်ငွေများများများမဆုံးရှုံးရခြင်းကိုသေချာစေသည်၊ ဤအချက်သည်အရေးကြီးသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက crypto market ကိုကျော်လွန်ပြီးအောင်မြင်ခဲ့သည့်မှတ်တမ်းများရှိသော်လည်းကုန်သွယ်မှုတစ်ခုချင်းစီကိုအနိုင်ရလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မတောင်းဆိုပါ။ ဆန့်ကျင်တွင်, အမြဲတမ်းကုန်သွယ်ဆုံးရှုံးမှုရှိလိမ့်မည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ crypto အချက်ပြမှုများကိုလုပ်ဆောင်သောအခါသင်တပ်ဆင်သင့်သောသင့်လျော်သော stop-loss order order စျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ ပ ...
ယူပါ - အမြတ်မှာယူမှုစျေး
အကောင်းဆုံး crypto အချက်အလက်များကသင့်အားထောက်ပံ့ပေးမည့်နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအချက်အလက်တစ်ခုမှာ - ဒါကအမြတ်ယူရန်အမှာစာဈေးနှုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Stop-loss order နှင့်တူသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏အန္တရာယ်များကိုလျှော့ချမည့်အစားကုန်သွယ်မှုမှကျွန်ုပ်တို့၏အမြတ်အစွန်းကိုပိတ်ဆို့ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အစောပိုင်းကပေးခဲ့သောဥပမာတွင်အကြံပြုထားသည့်ယူ - အမြတ်မှာယူမှုမှာဒေါ်လာ ၂၃၈.၇၄ ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကဒေါ်လာ ၂၃၁.၇၉ ၏သတ်မှတ်ထားသောအကန့်အသတ်စျေးထက် ၃% အထက်တွင်ရှိသည် - ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအထူး crypto signal ကို ၃% အကျိုးအမြတ်ရရှိရန်ကြိုးစားသည်။ ထပ်မံ၍ အမြတ်အစွန်းစျေးကိုစျေးကွက်နှင့်ကိုက်ညီလျှင် crypto ပွဲစားကကုန်သွယ်မှုကိုအလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရာထူးမှထွက်ခွာရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်တွင်ထိုင်စရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့၏အမြတ်အစွန်းကိုပိတ်ထားနိုင်သည်။
ဆုလာဘ် vs အန္တရာယ်
အထက်ဖော်ပြပါကဏ္ stop မှ Stop-loss နှင့်အမြတ်ယူရန်ညွှန်ကြားချက်များအရ CryptoSignals.org မှလေ့လာသုံးသပ်သူများအဖွဲ့သည် crypto အချက်အလက်များပေးပို့သောအခါအန္တရာယ် / အကျိုးအမြတ်အချိုးအစားအမြဲတမ်းရှိလိမ့်မည်။ အထက်ပါဥပမာတွင်စွန့်စားမှုသည် ၁% ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏အဆိုပြုထားသော stop-loss စျေးနှုန်းအတိုင်းဖြစ်သည်။ ညီမျှခြင်းရဲ့ရလာဒ်က ၃% ပါ။ အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့အမြတ်အစွန်းယူတာပါ။ အရေးကြီးသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့သော crypto အချက်အလက်များသည် 1/3 စွန့်စားမှု / ဆုရရှိမှုအချိုးအစားကိုလိုက်နာလိမ့်မည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်းအနှီးရဲ့ ၁% ကိုအမြတ် ၃% ရဖို့အတွက်စွန့်စားနေတယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုတယ် အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်အမြတ်အစွန်းရဖို့အတွက်သုံးယောက်မှာအောင်မြင်တဲ့ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုပဲရှိရမယ်။
CryptoSignals.org မှအိမ်တွင်းလေ့လာသုံးသပ်သူများသည် cryptocurrency market များကျယ်ပြန့်စွာအထူးပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုသင့်သည်။ ၎င်းတွင် crypto-to-fiat သာမက crypto-to-crypto အတွဲများပါ ၀ င်သည်။
သတိမထားမိသူများအတွက် crypto-to-fiat စုံတွဲသည် Bitcoin ကဲ့သို့သောဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာကဲ့သို့သောတစ်မျိုးတည်းသောငွေကြေးတစ်ခုပါဝင်လိမ့်မည်။ ဒီဥပမာမှာ pair တစုံကို BTC / USD အဖြစ်ကိုယ်စားပြုလိမ့်မယ်။
စကားမစပ်, ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အများဆုံးကုန်သွယ် cryptocurrency pair တစုံသည် - ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာနေ့တိုင်းလက်ပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်အတူ။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲထားပြီးကျွန်ုပ်တို့ထံမှသင်ရရှိသော crypto အချက်အလက်များသည် CryptoSignals.org သည်ဤစျေးကွက်တွင်အခြေပြုလိမ့်မည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သည်များသည်အမျိုးမျိုးသော crypto-to-crypto အတွဲများကိုအရောင်းအ ၀ ယ်ပြုကြသည်။ ၎င်းတွင် BTC / ETH အမျိုးအစားများပါ ၀ င်သည် - ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် Bitcoin နှင့် Ethereum အကြားငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုရောင်းဝယ်နေကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းလေ့လာသုံးသပ်သူများရောင်းဝယ်လိုကြသောနောက်ထပ် crypto အတွဲမှာ XRP / XLM ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် Ripple နှင့် Stellar တို့ပါဝင်ပြီး၎င်းသည်အလွန်အမင်းမတည်ငြိမ်သောသွင်ပြင်လက္ခဏာများကြောင့် crypto signal အခွင့်အလမ်းများစွာကိုတင်ပြသည်။
crypto အချက်ပြနေရာ၌မဖြစ်မနေလိုအပ်သောနောက်ထပ်သောမက်ထရစ်သည်စျေးကွက်၏ ဦး တည်ချက်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်ကုန်သွယ်မှုအပေါ်ရှည်လျားသို့မဟုတ်တိုတောင်းသငျ့သလော ဤအချက်အလက်မရှိပါက crypto signal သည်တန်ဖိုးမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ crypto signal သည်သင့်အားကြာမြင့်စွာသွားရန်ပြောပါက၎င်းသည်အတွဲသည်တန်ဖိုးတိုးလာမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဆိုလိုသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ crypto အချက်ပြကသင့်အားတိုတောင်းမည်ဟုပြောလျှင်ဆိုလိုသည်မှာထိုအတွဲသည်တန်ဖိုးလျော့သွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဆိုလိုသည်
အကယ်၍ crypto အချက်ပြသည်သင့်အားကြာမြင့်စွာသွားရန်ညွှန်ကြားထားပါကသင်ရွေးချယ်ထားသော crypto ပွဲစားတွင် ၀ ယ်ရန်အမှာစာကိုစီစဉ်ထားရန်လိုအပ်သည်
သို့သော်၊ crypto အချက်ပြကသင့်အားတိုတောင်းရန်ပြောလျှင်၊ ရောင်းမည့်အမှာစာကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ PipSignals မှလေ့လာသုံးသပ်သူများအဖွဲ့သည် crypto အတွဲများကိုကြာရှည်စွာဖြတ်သန်းရလွယ်ကူသည်။ အရေးကြီးသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ရောင်းဝယ်သည့်သက်ဆိုင်ရာဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ အဲဒီအစားကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာရာထူးမှအမြတ်အစွန်းရရန်ဖြစ်သည်။
၎င်းကိုမမှားပါနှင့် - အကောင်းဆုံး crypto အချက်ပြများသည်လိုအပ်သောကန့်သတ်ချက်အမှာစာနှင့်အမြဲတမ်းလာလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကုန်သွယ်မှုအတွက်အသစ်အဆန်းဖြစ်နေပါကစျေးကွက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ရန်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်အွန်လိုင်းပွဲစားအများစုက 'စျေးကွက်အမှာစာ' ကိုလိုချင်လားဟုမေးကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာပွဲစားသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုချက်ချင်းပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ဤအရာသည်ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်ကောင်းမွန်သော်လည်း၎င်းသည်ရေတို crypto အရောင်းအဝယ်အတွက်တကယ်မသင့်တော်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကုန်သွယ်မှုကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ၀ ယ်ဖို့ဆိုတာစွန့်စားမှုပိုများတာကိုဆိုလိုတာပါ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ CryptoSignals.org မှကျွန်ုပ်တို့သည် BTC / USD ကိုကုန်သွယ်နေသည်ဟုဆိုပါစို့။ ၎င်းသည်လက်ရှိတွင်ဒေါ်လာ ၄၉၅၀၀ ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်တွင်းရေးလေ့လာသုံးသပ်သူများအဖွဲ့သည်နည်းပညာများကိုကြည့်ပြီး BTC / USD ကဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ ကိုချိုးဖောက်သင့်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ကောင်းဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ထို့နောက်ရှည်လျားသောရာထူးကိုယူသင့်သည်။
လက်ရှိဒေါ်လာ ၄၉၅၀၀ ထက်မက - ဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ အထက်သာစျေးနှုန်းဖြင့်သာ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်မှာကန့်သတ်ချက်အမိန့်နေရာရောက်လာသည်။
တစ်နည်းဆိုရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်မှုအားဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ ဖြင့်အကာအကွယ်ပေးရန် - ဤစျေးနှုန်းတွင်ကန့်သတ်ချက်အမိန့်ကိုဖန်တီးရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သည့်အခါ BTC / USD သည်ဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ ထိရောက်လျှင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပွဲစားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်မှုကိုသာလုပ်လိမ့်မည်။ ထိုအချိန်အထိ, ကန့်သတ်အမိန့်ဆိုင်းငံ့နေဆဲဖြစ်သည်။
ရှားရှားပါးပါးဖြစ်ရပ်များ မှလွဲ၍ CryptoSignals.org ရှိ crypto အချက်ပြမှုအားလုံးသည်အကန့်အသတ်ရှိသောစျေးနှုန်းဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ ဤနေရာတွင်တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်မှာကုန်သွယ်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိပါကပျောက်ဆုံးခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။
ယခုအချိန်ထိအကောင်းဆုံး crypto အချက်အလက်များသည်မည်သည့်ကုန်သွယ်ရေး၊ မည်မျှရှည်ရမည်၊ တိုမည်၊ မည်သည့်ဝင်ငွေစျေးနှုန်းကိုသင့်ကန့်သတ်ချက်အတိုင်းသတ်မှတ်သင့်ကြောင်းဖော်ပြလိမ့်မည်။
သို့သော်ဤသည်မှာစစ်ပွဲ၏ထက်ဝက်သာဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ စွန့်စားမှုမှရှောင်ရှားနိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်ကုန်သွယ်ရန်အတွက်သင့်အနေဖြင့်ဝင်ပေါက်မဟာဗျူဟာတစ်ခုသင့်တွင်ရှိသင့်သည်။
ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့ CryptoSignals.org မှသင်၏ crypto အချက်အလက်များမှသင်အမြတ်ထုတ်ရန်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုသေချာစေရန် - ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတစေအရှုံးနှင့်အမြတ်ယူရန်အမိန့်များကိုအမြဲပေးသည်။ ရပ်တန့်မှုဆုံးရှုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်သွယ်ရေးတွင်ငွေများများများမဆုံးရှုံးရခြင်းကိုသေချာစေသည်၊
၎င်းသည်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက crypto market ကိုကျော်လွန်ပြီးအောင်မြင်ခဲ့သည့်မှတ်တမ်းများရှိသော်လည်းကုန်သွယ်မှုတိုင်းကိုအနိုင်ရလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မတောင်းဆိုပါ။
ဆန့်ကျင်တွင်, အမြဲတမ်းကုန်သွယ်ဆုံးရှုံးမှုရှိလိမ့်မည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ crypto အချက်ပြမှုများကိုလုပ်ဆောင်သောအခါသင်အသုံးပြုသင့်သောသင့်တော်သော stop-loss order price ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့ပေးခဲ့သော crypto signal ဥပမာတွင် BTC / USD တွင်ရှည်လျားသောအနေအထားကိုဒေါ်လာ ၂၃၁.၇၉ ဖြင့်သတ်မှတ်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် Stop-loss အမှာစာကိုဒေါ်လာ ၂၂၉.၄၈ ဖြင့်သာထားသင့်ပါတယ်။
၎င်းသည်အကြောင်းပြချက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် - ၎င်းသည်အများဆုံးဆုံးရှုံးမှုကို ၁% ကိုယ်စားပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ BTC / USD သည် ၁% အထိကျွန်ုပ်တို့ကိုဆန့်ကျင်ပြီး ၂၂၉.၄၈ ဒေါ်လာတန်ကြေးထိလျှင် - stop-loss order သည်စတင်လိမ့်မည်။ 1% ၏သေးငယ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူကွယ်ပျောက်။
အကောင်းဆုံး crypto အချက်အလက်များကသင့်အားထောက်ပံ့ပေးမည့်နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအချက်အလက်တစ်ခုမှာ - ဒါကအမြတ်ယူရန်အမှာစာဈေးနှုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Stop-loss order နှင့်တူသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏အန္တရာယ်များကိုလျှော့ချမည့်အစားကုန်သွယ်မှုမှကျွန်ုပ်တို့၏အမြတ်အစွန်းကိုပိတ်ဆို့ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။
အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့ပေးခဲ့သောဥပမာတွင်အကြံပြုထားသည့်ယူ - အမြတ်မှာယူမှုမှာဒေါ်လာ ၂၃၈.၇၄ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဆိုပြုထားသောကန့်သတ်ချက်အမိန့်ဈေးနှုန်း၏ဒေါ်လာ ၃၃၁.၇၉ ထက် ၃% အထက်တွင်ရှိသည် - ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် crypto signal ကို ၃% အကျိုးအမြတ်ရရှိရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။
ထပ်မံ၍ အမြတ်အစွန်းစျေးကိုစျေးကွက်နှင့်ကိုက်ညီလျှင် crypto ပွဲစားကကုန်သွယ်မှုကိုအလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရာထူးမှထွက်ခွာရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်တွင်ထိုင်စရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့၏အမြတ်အစွန်းကိုပိတ်ထားနိုင်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါကဏ္ stop မှ Stop-loss နှင့်အမြတ်ယူရန်ညွှန်ကြားချက်များအရ CryptoSignals.org မှလေ့လာသုံးသပ်သူများအဖွဲ့သည် crypto အချက်အလက်များပေးပို့သောအခါအန္တရာယ် / အကျိုးအမြတ်အချိုးအစားအမြဲတမ်းရှိလိမ့်မည်။
အထက်ပါဥပမာတွင်စွန့်စားမှုသည် ၁% ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏အဆိုပြုထားသော stop-loss စျေးနှုန်းအတိုင်းဖြစ်သည်။ ညီမျှခြင်းရဲ့ရလာဒ်က ၃% ပါ။ အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့အမြတ်အစွန်းယူတာပါ။
အရေးကြီးသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့သော crypto အချက်အလက်များသည် 1/3 စွန့်စားမှု / ဆုရရှိမှုအချိုးအစားကိုလိုက်နာလိမ့်မည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ကအရင်းအနှီးရဲ့ ၁% ကိုအမြတ် ၃% ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်အမြတ်အစွန်းရဖို့အတွက်သုံးယောက်မှာအောင်မြင်တဲ့ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုပဲရှိရမယ်။
အစပြုသူများအတွက် Crypto Signal များ CryptoSignals.org
01 ။ စျေးကွက်ကိုနားလည်ပါ
သင် Bitcoin ကဲ့သို့ cryptocurrencies ရောင်းဝယ်ရန်ရှာဖွေနေသည်,
Ethereum နှင့် Ripple - သို့သော်ဤစျေးကွက်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုနားမလည်ပါ။
ညွှန်းကိန်းများအမျိုးမျိုးမှတဆင့် cryptocurrency စျေးနှုန်းခေတ်ရေစီးကြောင်းအပေါ်အဆင့်မြင့်သုတေသနဖျော်ဖြေ။ RSI, MACD, Moving Averages နှင့်အခြားအရာများနှင့်တစ်ပြိုင်နက်စဉ်းစားပါ။
02 ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု -set ကိုရရှိပါ
အမှန်တရားကတော့ - သင့်မှာနည်းပညာစွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ကျွမ်းကျင်မှု -set မရှိဘူးဆိုရင်
အဆိုပါ crypto ကုန်သွယ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တသမတ်တည်းအကျိုးအမြတ်။ အဲဒီအစား၊ သင့်ရဲ့အကောင့်လက်ကျန်ငွေကိုဖြတ်သန်းသွားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၎င်းသည်သင့်အားမည်သည့်စာရွက်စာတမ်းကိုမဆိုထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲ cryptocurrency စျေးကွက်များကိုသင်ရောင်းဝယ်ခွင့်ပြုသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ crypto အချက်ပြများသည်လူသစ်များအတွက်သာမသင့်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်စျေးကွက်သုတေသနပြုရန်အချိန်မရရှိနိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် CryptoSignals.org သည်ကျွမ်းကျင်မှုအားလုံး၏ကုန်သည်များကိုကူညီနိုင်သည်။
03 ။ အမြတ်နှင့်အတူကုန်သွယ်
ဤတွင် CryptoSignals.org သည်ကူညီနိုင်သည်။ အသေးစိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ရှင်းပြသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏ crypto အချက်အလက်များသည်သင့်အားပြောပြလိမ့်မည်
သင်စွန့်စားရမည့်နည်းလမ်းဖြင့်ကုန်သွယ်ရန်သင်သိရန်လိုအပ်သမျှ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှအချက်ပြမှုကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်မည်သည့် crypto စုံသည်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည်၊ ရှည်မည်လား၊ တိုမည်လား၊ မည်သည့်ဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်စျေးနှုန်းကိုပစ်မှတ်ထားကြောင်းသိလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများပြောသည့်စကား
ဝိန်း Fort Worth, TX
ငါဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အခမဲ့ကြေးနန်းအုပ်စုထဲကိုဝင်ဝင်ပြီးကတည်းကငါနဲ့အကောင့်ဖွင့်လိုက်ပြီ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပွဲစားနှင့် ငါအခုပေါ့ VIP အုပ်စုထံမှကုန်သွယ်မှုအောက်ပါ ငါယခုနေ့စဉ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖတ်ပါနှင့် youtube ကိုလိုက်နာပါ ရုပ်သံလိုင်း ဗီဒီယိုအားလုံးကိုကြည့်ပါ
Mark K ပါ
VIP ကြေးနန်းကိုဝင်ပြီးကတည်းက crypto အကြောင်းအများကြီးလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည် အုပ်စု။ အဲဒီမှာ နေ့စဉ်ဆောင်းပါးများဖြစ်ကြသည် ငါတတ်နိုင်သမျှ ဖတ်ပါထို့နောက် back up လုပ်ဖို့ကုန်သွယ် သတင်းအချက်အလက်။ ယင်း ၁၀ အတွက် ၁၀ ရတယ်။
ငါအခမဲ့ Telegram ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးထို့နောက်လျင်မြန်စွာ VIP အုပ်စုအဆင့်မြှင့်ခဲ့သည်။ ငါနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတကယ်ကိုသိကောင်းစရာများကိုရှာဖွေငါ့ကိုတကယ် cryptocurrency နှင့်ကဘယ်လိုကုန်သွယ်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူကူညီပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သည်များသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိအရောင်းအ ၀ ယ်များမှကင်းထောက်ခဲ့ကြသည်။
သငျသညျအခမဲ့ join နိုင်ပါတယ် VIP အုပ်စု ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရောင်းအများ၏ဥပမာကိုကြည့်ရှုရန်ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ခြင်းဖြင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
အကောင်းဆုံး CRYPTO လက္ခဏာတွေသည်
သင်စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံး crypto အချက်အလက်များရှာဖွေရန်သာမကလိုအပ်သောအမှာစာများအတွက်ထိပ်တန်းအဆင့်ပွဲစားလည်းရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့သင့်အနားမှာပွဲစားတစ်ယောက်မပါဘဲ crypto trading မြင်ကွင်းကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အခကြေးငွေများနှင့်ကော်မရှင်များကိုပင်သင်မကြည့်မီကျွန်ုပ်တို့၏ crypto အချက်ပြများကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားပြီးယုံကြည်ရသောပွဲစားတစ် ဦး နှင့်အသုံးပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, crypto ကုန်သွယ်မြင်ကွင်းတစ်ခုများစွာသောစည်းမျဉ်းလိုင်စင်မရှိဘဲလုပ်ကိုင် - အလွန်ပြaticနာဖြစ်သည့်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်ဆိုလိုသည်မှာပွဲစားသည်မည်သည့်ဘဏ္bodyာရေးဌာနကိုမှမလိုအပ်ဟုဆိုလိုသည်။ သင့်အားမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ညွှန်ပြရန်ကူညီရန် - ဤအာကာသထဲရှိအဓိကထိန်းညှိသူများသည် FCA (UK) SEC (US), ASIC (Australia) နှင့် CySEC (ဆိုက်ပရပ်စ်) တို့ပါဝင်သည်။ ...
ကျွန်ုပ်တို့၏ crypto အချက်အလက်များသည်အမြန်နှုန်းနှင့်ကျိုးနွံမှုရှိသည့်အကျိုးအမြတ်များကိုပစ်မှတ်ထားသောကြောင့်ကော်မရှင်အနိမ့်နှင့်တင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှုများကိုပေးသောပွဲစားတစ် ဦး ကိုသင်ရွေးချယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အရင်နှင့်စပ်လျဉ်း။ သင့်အားကော်မရှင်မလိုဘဲကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည့် crypto ပွဲစားများစွာရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်ပေးဆောင်ရမည့်တစ်ခုတည်းသောအခကြေးငွေကိုပြန့်ပွားခြင်းမှရရှိသည်။
CryptoSignals VIP တယ်လီဂရမ်အုပ်စုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းဝင်အားလုံးနှင့်ကုန်သွယ်ရန်အရင်းအနှီးအမြောက်အများမရှိပါ။ အကယ်၍ ဤအရာသည်သင်ကဲ့သို့ဖြစ်နေလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြမှုများကိုအောင်မြင်အောင်မပြုလုပ်နိုင်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, သြဇာကမ်းလှမ်းသော crypto ပွဲစားကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏အကောင့်ထဲမှာရှိထက်ပိုပြီးနှင့်အတူကုန်သွယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်ရရှိနိုင်သောသြဇာပမာဏသည်အချက်အလက်များပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်။ ဥပမာပွဲစားပွဲစားနှင့်သင်နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်သည်။
သင်ရွေးချယ်ထားသည့်ပွဲစားသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးစျေးကွက်များကိုကမ်းလှမ်းသောကြောင့်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ crypto အချက်အလက်များအတွက်သင့်တော်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းလေ့လာသုံးသပ်သူများအဖွဲ့သည်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်မတူကွဲပြားသောချဉ်းကပ်နည်းကိုအသုံးပြုလိုကြသည် - ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်ပုံစံနှင့်အရွယ်အစားအားလုံးအတွက် crypto အတွဲများကိုပစ်မှတ်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အချက်ပြမှုတစ်ခုသည် BTC / USD နှင့်ဆက်စပ်နေပြီးနောက်တစ်ခုမှာ ETH / XRP မှအကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်သည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ crypto-to-fiat နှင့် crypto-to-crypto အတွဲနှစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်သောစျေးကွက်ပုံများကမ်းလှမ်းသည့် crypto ပွဲစားကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံး။
သင်ရွေးချယ်ထားသော crypto ပွဲစားသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုသေချာအောင်လုပ်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းများသည်ဒက်ဘစ်၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့် e-wallet သိုက်များကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်သင်၏အကောင့်ကိုချက်ချင်းရန်ပုံငွေခွင့်ပြုပြီးများစွာသောကိစ္စများတွင် - အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဘဏ်ငွေပေးချေမှုကိုသာလက်ခံသောပလက်ဖောင်းများကိုသင်ရှောင်ရှားလိုပေမည်။ အကြောင်းမှာရန်ပုံငွေများရောက်ရှိရန်ရက်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။
ဒါဟာ Bitcoin ဝေးနေဖြင့်ဒီစျေးကွက်အတွက်အများဆုံးကုန်သွယ် cryptocurrency ကြောင်းပြောသွားသည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်သည်များသည်အလွန်မြင့်မားသောအရည်အချင်းရှိသောလူတန်းစားမှအမြတ်ထုတ်ရန်ပုံမှန်ကြည့်ရှုကြလိမ့်မည်။ များစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Bitcoin အရောင်းအဝယ်အချက်ပြမှုများကို BTC / USD သို့ပေးပို့လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည် crypto-to-crypto အတွဲများကိုလည်းဖုံးကွယ်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းသုတေသီများသည် BTC ကို ETH နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်တန်ဖိုးရှိသည်ဟုထင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူ Bitcoin ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုကိုပေးပို့လိမ့်မည်။ CryptoSignals.org တွင်ဤနေရာ၌အကောင်းဆုံး Bitcoin အရောင်းအဝယ်အချက်အလက်များမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင့်အားစိတ်ကူးတစ်ခုပေးရန် - အောက်ပါဥပမာကိုကြည့်ပါ။ Pair: BTC / USD အမှာစာ: Sho ...
သင်စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံး crypto အချက်ပြများကို Telegram အုပ်စုမှတဆင့်ဝင်ရောက်ကြောင်းသတိပြုမိပေလိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာ crypto အချက်ပြတွေကို real-time မှာလက်ခံရရှိမှာဖြစ်လို့အမြတ်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုဘယ်တော့မှလက်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ Telegram အုပ်စုများတွင်အကောင်းဆုံး crypto အချက်အလက်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ထောင်နှင့်ချီသောတက်ကြွသောအသင်းဝင်များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုအက်ပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် crypto trading အတွေးအခေါ်များကိုဆွေးနွေးရန်ခွင့်ပြုသည်။ Telegram အုပ်စုများတွင်အကောင်းဆုံး crypto အချက်အလက်များသည်လည်းအချိန်နှင့်တပြေးညီဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ရရှိသည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ Telegram မှအရည်အသွေးကောင်းအချက်ပြများကိုလက်ခံခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးမှုဖြစ်သည်။
အခကြေးငွေများနှင့်ကော်မရှင်များကိုပင်သင်မကြည့်မီကျွန်ုပ်တို့၏ crypto အချက်ပြများကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားပြီးယုံကြည်ရသောပွဲစားတစ် ဦး နှင့်အသုံးပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, crypto ကုန်သွယ်မြင်ကွင်းတစ်ခုများစွာသောစည်းမျဉ်းလိုင်စင်မရှိဘဲလုပ်ကိုင် - အလွန်ပြaticနာဖြစ်သည့်။
သင့်အားမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ညွှန်ပြရန်ကူညီရန် - ဤအာကာသထဲရှိအဓိကထိန်းညှိသူများသည် FCA (UK) SEC (US), ASIC (Australia) နှင့် CySEC (ဆိုက်ပရပ်စ်) တို့ပါဝင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ crypto အချက်အလက်များသည်အမြန်နှုန်းနှင့်ကျိုးနွံမှုရှိသည့်အကျိုးအမြတ်များကိုပစ်မှတ်ထားသောကြောင့်ကော်မရှင်အနိမ့်နှင့်တင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှုများကိုပေးသောပွဲစားတစ် ဦး ကိုသင်ရွေးချယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ယခင်နှင့်စပ်လျဉ်း။ သင့်အားကော်မရှင်မှကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည့် crypto ပွဲစားများစွာရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ပေးဆောင်ရမည့်တစ်ခုတည်းသောကြေးသည်ပြန့်ပွားခြင်းမှရရှိသည်။
သင်ရွေးချယ်ထားသည့်ပွဲစားသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးစျေးကွက်များကိုကမ်းလှမ်းသောကြောင့်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ crypto အချက်အလက်များအတွက်သင့်တော်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းလေ့လာသုံးသပ်သူများအဖွဲ့သည်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်မတူကွဲပြားသောချဉ်းကပ်နည်းကိုအသုံးပြုလိုကြသည် - ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်ပုံစံနှင့်အရွယ်အစားအားလုံးအတွက် crypto အတွဲများကိုပစ်မှတ်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အချက်ပြမှုတစ်ခုသည် BTC / USD နှင့်ဆက်စပ်နေပြီးနောက်တစ်ခုမှာ ETH / XRP မှအကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်သည်။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ crypto-to-fiat နှင့် crypto-to-crypto အတွဲနှစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်သောစျေးကွက်ပုံများကမ်းလှမ်းသည့် crypto ပွဲစားကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံး။
သင်ရွေးချယ်ထားသော crypto ပွဲစားသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုသေချာစွာပြုလုပ်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းများသည်ဒက်ဘစ်၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့် e-wallet သိုက်များကိုပေးသည်။ ဤသည်ကသင့်အားသင်၏အကောင့်ကိုချက်ချင်းရန်ပုံငွေခွင့်ပြုပြီးများစွာသောကိစ္စများတွင် - အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဒါဟာ Bitcoin ဝေးနေဖြင့်ဒီစျေးကွက်အတွက်အများဆုံးကုန်သွယ် cryptocurrency ကြောင်းပြောသွားသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သည်များသည်အလွန်မြင့်မားသောအရည်အချင်းရှိသောလူတန်းစားမှအမြတ်ထုတ်ရန်ပုံမှန်ကြည့်ရှုကြလိမ့်မည်။
များစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Bitcoin အရောင်းအဝယ်အချက်ပြမှုများကို BTC / USD သို့ပေးပို့လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည် crypto-to-crypto အတွဲများကိုလည်းဖုံးကွယ်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းသုတေသီများသည် BTC ကို ETH နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်တန်ဖိုးရှိသည်ဟုထင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူ Bitcoin ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုကိုပေးပို့လိမ့်မည်။
CryptoSignals.org တွင်ဤနေရာ၌အကောင်းဆုံး Bitcoin အရောင်းအဝယ်အချက်ပြမှုမည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုစိတ်ကူးတစ်ခုပေးရန် - အောက်ပါဥပမာကိုကြည့်ပါ။
ကန့်သတ်: $ 61,500
ယူ - အမြတ်: $ 57,000
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော Bitcoin အချက်ပြအကြံပြုချက်အရကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းကုန်သည်များသည်လာမည့်နာရီများအတွင်း BTC / USD သည်ကျဆင်းလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီဈေးကွက်မှာဒေါ်လာ ၆၁,၅၀၀ ဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်ငါတို့ကဈေးကွက်ထဲမဝင်ချင်ဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဆက်လက်မြင့်တက်နေသည့်အခြေအနေတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖုံးအုပ်ထားရန် Bitcoin အချက်ပြအကြံပြုချက်ကရပ်တန့်မှုအရှုံးဒေါ်လာ ၆၂၀၀၀ ကိုအကြံပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော Bitcoin အချက်အလက်များဖြန့်ဝေသောအခါကျွန်ုပ်တို့အမြဲပေးသောအရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Bitcoin အရောင်းအ ၀ ယ်အချက်အလက်များတွင်အကြံဥာဏ်ယူထားသောအမြတ်အစွန်းများပါ ၀ င်သည်။ အကယ်၍ အစပျိုးပါကသင်၏အမြတ်အစွန်းကိုသင်၏ရွေးချယ်ထားသော crypto ပွဲစားတွင်အလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်။
အခမဲ့ Bitcoin ထရေးဒင်းအချက်ပြ
သင်အခမဲ့ Bitcoin အချက်ပြမှုများအတွက်စျေးကွက်တွင်ရှိပါသလား။ သို့ဆိုလျှင် CryptoSignals.org မှကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ပတ်လျှင်ကုန်သွယ်ရေးအကြံပြုချက်သုံးခုပါ ၀ င်သည့်အခမဲ့ Bitcoin signal service ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်မတူဘဲ - အကန့်အသတ် (သို့) Stop-loss စျေးနှုန်းကိုဖော်ပြရန်သင့်အားအပိုငွေပေးရန်မတောင်းဆိုပါ။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အထက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Bitcoin pair၊ ရှည်လျားသောသို့မဟုတ်တိုတောင်းသောအနေအထား၊ ကန့်သတ်ချက်၊ stop-loss နှင့်အမြတ်အစွန်းစျေးနှုန်းများဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့ Bitcoin အရောင်းအ ၀ ယ်အချက်ပြမှုများကိုကမ်းလှမ်းသောအကြောင်းအရင်းမှာအသင်း ၀ င်သစ်များအားကတိကဝတ်မပြုမီကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုစမ်းသပ်ခွင့်ပြုသည်။ အရေးကြီးသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ Bitcoin အချက်အလက်များရရှိရန်သင် CryptoSignals.org တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ crypto trading အချက်အလက်များရရှိရန်မည်သည့်ရန်ပုံငွေမဆိုငွေသွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ Telegram signal group သို့တိုက်ရိုက်သွားနိုင်သည်။
သင်စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံး crypto အချက်အလက်များသည် Telegram အုပ်စုမှတဆင့်ဝင်ရောက်ကြောင်းသင်သတိပြုမိပေမည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာ crypto အချက်ပြတွေကို real-time မှာလက်ခံရရှိမှာဖြစ်လို့အမြတ်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုဘယ်တော့မှလက်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူး။
အကောင်းဆုံး crypto အချက်အလက်များ Telegram အုပ်စုများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောတက်ကြွသောအဖွဲ့ဝင်များရှိသည်။
၎င်းသည်သင်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုအက်ပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် crypto trading အတွေးအခေါ်များကိုဆွေးနွေးရန်ခွင့်ပြုသည်။
Telegram အုပ်စုများတွင်အကောင်းဆုံး crypto အချက်အလက်များသည်လည်းအချိန်နှင့်တပြေးညီဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ရရှိသည်။
ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ Telegram မှအရည်အသွေးအချက်ပြမှုကိုလက်ခံခြင်းအားဖြင့်ဤအာကာသထဲရှိအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးသူများသည်အကြံပြုချက်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ဂရပ်သို့မဟုတ်ဇယားကိုတွဲပေးလိမ့်မည်။
တစ်နည်းအားဖြင့် Telegram အုပ်စုများသည်အကောင်းဆုံး crypto အချက်အလက်များသည်သင့်အားတစ်ချိန်တည်းတွင်ဝင်ငွေနှင့်သင်ယူရန်ခွင့်ပြုသည်။
သင်ရွေးချယ်သောအကောင်းဆုံး Telegram အုပ်စုသည်အကောင်းဆုံး crypto အချက်အလက်များဖြင့်မစတင်မီစိတ်ကြိုက်အကြောင်းကြားစာတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးရန်အကြံပြုလိမ့်မည်။ ဤအသံအသိပေးချက်ကိုသေချာစေခြင်းအားဖြင့်သင်၏ crypto အချက်အလက်များ Telegram အုပ်စုအတွက်ထူးခြားသည် - သင်အနေဖြင့်အကြံပြုထားသည့်အမိန့်များကိုပြုလုပ်နိုင်ရန် app ကိုချက်ချင်းဖွင့်ရန်သင်သိလိမ့်မည်။
အခမဲ့ Crypto Signals Telegram Group
သင်တို့ထဲမှအချို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရီမီယံအစီအစဉ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းမပြုမီကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေး crypto အချက်ပြမှုကိုစမ်းသပ်လိုပေမည်။ အဲဒီလိုဆိုရင် Telegram group ကိုအခမဲ့ crypto အချက်ပြတွေကမ်းလှမ်းတာကိုသင်သဘောကျတယ်။ သင်သည်အစဉ်အမြဲတိုးတက်နေသော Telegram ရုပ်သံလိုင်းသို့ဆက်သွယ်ပြီးသည်နှင့်တပတ်လျှင်အခမဲ့ crypto အချက်ပြ ၃ ကြိမ်သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် BTC / EUR၊ BTC / USD သို့မဟုတ် ETH / USD စသည့် crypto-to-crypto အတွဲများပါဝင်နိုင်သည်။ အခြားကိစ္စရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ crypto အချက်အလက်များသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှစ်ခုပါ ၀ င်သည့်စွမ်းအားအားလုံးပါ ၀ င်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့ crypto အချက်ပြများကို BTC / ETH, BTC / XRP နှင့် ETH / LTC သို့ပုံမှန်ပို့သည်။
Telegram အုပ်စုမှတဆင့်အခမဲ့ crypto signal ကိုသင်ရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာသင်ရွေးချယ်ထားသောပွဲစားထံသို့သွားပြီးအကြံပြုထားသည့်အမှာစာများဖြစ်သည်။ တကယ်လို့ခင်ဗျားဟာလိမ္မာပါးနပ်တဲ့ကုန်သည်တစ်ယောက်ဆိုရင်ခင်ဗျားဟာအခမဲ့ပွဲစားသရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုမှတဆင့်ငါတို့ကိုစစ်ဆေးဖို့ဆုံးဖြတ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်။
အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ငါတို့ရဲ့အခမဲ့ crypto အချက်အလက်များအပေါ်တစ်ပြားတစ်ချပ်မျှမစွန့်စားသင့်ပါဘူး။ အဲဒီအစား, သင်က 'စက္ကူရန်ပုံငွေ' 'နှင့်အတူငါတို့အကြံပြုအမိန့်ကိုနေရာချပါလိမ့်မယ်။ signal အနေအထားတစ်ခုချင်းစီကိုပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အနေအထားရဲ့ရလဒ်ကိုရေးချနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့ crypto signal ကို 25 pips လုပ်ခဲ့လျှင်၎င်းကိုမှတ်သားထားပါ။ စမ်းသပ်မှုအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ crypto အချက်အလက်များသည်သင်၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းတွေ့ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ premium အစီအစဉ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်စဉ်းစားနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်သည်နေ့စဉ်ပရီမီယံ crypto အချက်အလက်များကို ၃-၅ လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ငါတို့ VIP CRYPTO SIGNAL တွင်ဘာတွေပါဝင်သလဲ Telegram အုပ်စု
ကျွန်ုပ်တို့မှအမြတ်အစွန်းရရှိသောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိ ၁၀၀၀၀ ကျော်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဆက်သွယ်ပါ VIP Crypto အချက်ပြများ နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များဖြစ်လာသည်။
2-3တစ်နေ့တာ Crypto အချက်ပြ
၂၄ ကီလိုဂရမ်ကြေးနန်းအသင်း ၀ င်များ
အောင်မြင်သော CRYPTO ကုန်သည်?
CryptoSignals.org သည်အဆင့်မြင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားသောကုန်သည်များအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ cryptocurrency ဈေးကွက်ကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ကွေးနနျးစာ အခြားသူများကကျွန်ုပ်တို့၏တိကျသော cryptocurrency အချက်ပြမှုများကနေလေ့လာသင်ယူနိုင်အောင်။
အခမဲ့ Crypto အချက်ပြမှုများ မေလ 2022 နှင့် Crypto သတင်းများ
© 2022 CRYPTOSIGNALS.ORG ။ အားလုံးကာကွယ်ထား။
cryptosignals.org ဝဘ်ဆိုဒ်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram အဖွဲ့အတွင်းရှိ အချက်အလက်များသည် ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြံပြုချက်အဖြစ် အဓိပ္ပါယ်မဖော်ပါ။ ငွေကြေးဈေးကွက်များ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းသည် မြင့်မားသောအန္တရာယ်ကို သယ်ဆောင်လာပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားလုံးအတွက် မသင့်လျော်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram အဖွဲ့များအတွင်း ပံ့ပိုးပေးထားသည့် အကြောင်းအရာကြောင့် Cryptosignals.org သည် ဆုံးရှုံးမှုအတွက် တာဝန်မယူပါ။
Crypto Signals အဖွဲ့သည် သင့်အား တိုက်ရိုက်မဆက်သွယ်ဘဲ ငွေပေးချေမှုကို ဘယ်တော့မှ မတောင်းဆိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များမှတဆင့် ဆက်သွယ်ပေးပါသည်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] ကျွန်ုပ်တို့တွင် အခမဲ့ Telegram ချန်နယ်တစ်ခုသာ ရှိသည်။ စာရင်းသွင်းမှုတစ်ခုဝယ်ယူပြီးနောက် VIP အဖွဲ့ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်မည်သူမဆိုထံမှ မက်ဆေ့ချ်များကို လက်ခံရရှိပါက ၎င်းတို့ကို သတင်းပို့ပြီး မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမှ မလုပ်ပါနှင့်။ ၎င်းသည် Crypto Signals အဖွဲ့ မဟုတ်ပါ။